မရဏချိုင့် Photoreal DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
အသေသတ်ခြင်းကိုချိုင့် Photoreal FSX & P3D
အရွယ် 1.07 GB ကို
downloads ရယူရန္ 47 594
Microsoft Flight Simulator ကို X SP2
အန်တိုနီယိုက C, Maurizio က G (Ozx) Holger Sandmann အားဖြင့် mesh
Auto-installer 10 ဗားရှင်း update လုပ်
များအတွက်မရဏချိုင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားအမေရိကန်နိုင်ငံ၏ Photoreal ရှုခင်း FSX SP2 နှင့် P3D (Prepar3D) autogen နှင့်မြှင့်တင်ရန် nightlights အတူ 2m / pixel (အချို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဒေသများ Trona ကဲ့သို့ 1m / pixel မှာလုပ်ထားပြီး) ၏ resolution ကိုအနည်းဆုံးဖန်တီးခဲ့သည်။ သာနွေရာသီရာသီ။ ကာတွန်းကိုရေနှင့်အလွန်ကောင်းတဲ့ရေကန်များရှိပါသည်။
သင် .... စိတ်ကူးခြံနှင့်ကျေးလက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအလွန်ချစ်စရာအမြို့မြို့, စက်မှုဇုန်ဒေသများနှင့်ရှုခင်းတစ်နေ့တာအတွင်းအများကြီးပြောင်းလဲရှိပါတယ် ... ဒါကြောင့်ကိုသာသဲကန္တာရမဟုတ်ပါဘူး, ဒီဧရိယာကြည့်ဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရာတို့ကိုတင်ဆက်သိမြင်ပါလိမ့်မယ် သငျသညျပျံသန်းအချိန်ကိုပေါ် မူတည်. စိတ်ကူးအရောင်တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမြင်ရပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာအသစ်နည်းလမ်းဟာအလွန်လက်တွေ့ကျ, အ nightlights နားလည်သဘောပေါက်ရန်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး, ထိုညဉ့်၌လည်းလှပသောပါပဲ။
အပိုအချက်အလက်များကိုသင်၏ "Start menu ->" တွင်တွေ့နိုင်သည် Add-ons Rikoooo -> Death Valley Photoreal FSX & P3D"
အဆိုပါတပ်ဆင်ခြင်း 100% Rikoooo အားဖြင့်အလိုအလျှောက်ဖြစ်ပါတယ်ထို configuration သင်တို့အဘို့အပျံသန်းမှု Simulator အတွက်ရှုခင်း၏မှတ်ပုံတင်နှင့် activation ကိုကိုင်တွယ်လိမ့်မည်။ uninstall လုပ်သောအခါ, installer ကိုဇာစ်မြစ်၏သင့်ရဲ့ configuration ကိုပြန်ပေးမည်။
သတိပြုရန်အလွန်ကြီးမားဖိုင် 1,07 GOထိုသို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဥပမာ (အဘယ်သူမျှမအံ့သြဖွယ်ရှိသည်ဖို့ဖမ်းဆီး၏အချက်မှာခဏနားပြီးကျန်တာတွေကိုပြန်လည်စတင်ဖို့ကို download accelerator software ကိုသုံးစွဲဖို့အကြံပြု FlashGet).
အရေးကြီးဘယ်လိုရှုခင်းကိုအသုံးပွုဖို့? သငျသညျအရည်ကျိုမီးဖိုအဘိဓါန် Creek (အမျိုးအစားလေဆိပ်ကနေနည်းလမ်းနမူနာအဘို့သင်တို့ပြေးယူနိုင်ပါသည် မီးဖိုအဘိဓါန် Creek or L06) သို့မဟုတ်တောင်မှဒီ list ထဲမှာတူပိုပြီးနေရာတွေကနေ:
မီးဖိုအဘိဓါန် Creek (L06) ကယ်လီဖိုးနီးယား
မီးဖိုပိုက်ဝဲလ် (L09) ကယ်လီဖိုးနီးယား
Lone ထင်းရူး (O26) ကယ်လီဖိုးနီးယား
Beatty (KBTY) နီဗားဒါး
လွတ်လပ်ရေးနေ့ (207) ကယ်လီဖိုးနီးယား
Trona (L72) ကယ်လီဖိုးနီးယား
Inyokern (KIYK) ကယ်လီဖိုးနီးယား
တရုတ်နိုင်ငံကန် (KNID) ကယ်လီဖိုးနီးယား
အောက်တွင်, ရှုခင်းအားဖြင့်စဉ်းစား Photo-လက်တွေ့ကျကျဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏ဒေသများဖြစ်ကြသည်။ အဲ့ဒါအပြင်ရှိတဲ့ default ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ FSX/P3D နောက်တဖန်ပြသပါလိမ့်မယ်။
ဤတွင်အချို့သော screenshots များနေသောခေါင်းစဉ်:
Author: အန်တိုနီယိုက C, Maurizio က G (Ozx) Holger Sandmann အားဖြင့် mesh
ဂရန်း Paradis နဲ့အီတလီ - Photoreal FSX & P3D
channel ကျွန်းများ X ကို HD ကို FSX & P3D
Corsica ဗားရှင်းငါ FSX & P3D
ပုရွက်ဆိတ်တွေ Hamilton ကကျွန်း FSX & P3D
ဖီဂျီ Photoreal Package ကိုအနောက်တိုင်းတပ်မ FSX & P3D